7 Amathiphu Wokugwema AmaPokhethi eYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Ikhambo Tips > 7 Amathiphu Wokugwema AmaPokhethi eYurophu
(Kugcine ukubuyekezwa On: 22/10/2021)
Amadolobha asendulo ezothando, izingadi ezibukekayo, izikwele ezinhle, ukuheha izigidi zabavakashi eYurophu nsuku zonke. Abahambi abavela kuwo wonke umhlaba bavakashela iYurophu ukuyohlola umlando wayo nobuhle bayo bese bezithola beqhutshwa ngamasu ahlakaniphile ezindaweni zomlando ezidumile zaseYurophu.. Hlala uphephile ohambweni lwakho olumangalisayo ngokulandela lezi zeluleko ukuze ugweme okokhethi eYurophu.
1. Amathiphu Wokugwema AmaPokhethi: Yazi Izindawo Eziyingozi
Ukwazi ukuthi ukuhamba kwakho kudlala indima enkulu ekubeni nesikhathi esihle kakhulu sempilo yakho. Ngakho, lapho uhlela iholide lakho e-Italy noma eFrance, kufanele ucwaninge izindawo okufanele ubone kuzo kanye nezindawo eziyingozi. Akunasizathu sokukhathazeka, ngeke uzithole usempini yamaqembu ezigelekeqe, kepha yonke indawo inezindawo ezibucayi, lapho izivakashi zidinga ukunaka ngokukhethekile izinto zazo futhi ziqaphele okokhethi.
ngokuvamile, izindawo okufanele uqaphele kuzo, yizindawo ezifana nezimakethe ezikhungathekisayo, izikwele ezidumile ezimatasa, futhi izinto zokuthutha umphakathi izindawo. Okuhlangene ngokufanayo zonke lezi zindawo ukuthi zigcwele kakhulu, ngakho-ke ngenkathi ubheke e-Eiffel Tower noma eMilan Cathedral, okhethwayo bangangena kalula kuwe, futhi ngemizuzwana isikhwama semali sakho sesihambile. Ukwazi okukuzungezile kanye nezixuku kuyisiphetho esiphakeme ukugwema okokhethi eYurophu.
2. Amaqhinga Wokucwenga Nokuqola
Isihambi esihle noma i-bump-into iqhinga 2 imikhonyovu ejwayelekile yokuqolwa kwamapikhethi eYurophu. Njengoba nje wonke amadolobha aseYurophu enezimpawu zawo zomlingo nezihlaba umxhwele, ngokufanayo nangesici sokuqola. Ngakho-ke, uma ufisa ukugcina izinto zakho eziyigugu, cwaninga kusenesikhathi ngemikhonyovu evamile yokuqoqa imali endaweni oya kuyo.
Izibonelo ezingeziwe zemikhonyovu yokukha phezulu kungumhambi omuhle ocela isikhathi noma izinkomba. Ngenkathi ubheka imephu yakho, noma bukela, asondela abambe noma yini esemaphaketheni noma esikhwameni sakho. Ngakho, qaphela futhi ungaweli kokukodwa kwe- 12 imikhonyovu emikhulu yokuhamba emhlabeni.
EParis Kuya eLondon Ngesitimela
Berlin Ukuya eLondon Ngesitimela
3. Amathiphu Wokugwema AmaPokhethi: Shiya Amagugu Ehhotela
Ukushiya ipasipoti, amakhadi esikweletu, nobucwebe esisefweni sehhotela kungenye yamathiphu aphezulu okugwema okhethi bezinto eYurophu. Njengoba kushiwo ngaphambili, ama-pickpockets anethalente lokwazi kahle ukuthi angathola kuphi izinto eziyigugu ngaphandle kokuba izivakashi ziqaphele. Ngaphezu kwalokho, namuhla lapho ungaba nekhophi yepasipoti yakho kwi-imeyili yakho noma ocingweni, noma ubhukhe amathikithi okubuka indawo ku-inthanethi, asikho isizathu sokuphatha yonke imali yakho noma amakhadi wesikweletu.
Ngakho, ngaphambi kokuthi uhambe ukuzulazula kokukodwa kwe- izimakethe ezihamba phambili eYurophu, thatha kuphela imali ethile. Asikho futhi isizathu sokuphatha wonke amakhadi wakho wesikweletu, kepha uma uphikelela, ukusabalalisa ukheshi namakhadi emaphaketheni angaphakathi ahlukene noma amabhande emali.
4. Gcina Amagugu Abalulekile Emaphaketheni Angaphakathi
Amabhande emali ngezinsuku zasehlobo noma emaphaketheni ejacket angaphakathi ayindlela enhle yokugcina izinto zakho eziyigugu ziphephile. Le ndlela yokuhamba kulula ukuyenza uma ugqoke izingqimba, ngesikhathi sokuwa noma sasebusika futhi kungahle kungakhululeki lapho isimo sezulu sifudumele futhi sinomswakama.
Ungathenga amabhande emali kunoma yisiphi isitolo sokuhamba noma sesikhumbuzo ekhaya noma phakathi nohambo, isibonelo eziteshini zezitimela eziphakathi nendawo noma ezikhumulweni zezindiza. Inzuzo yokugcina izinto emaphaketheni angaphakathi isobala, abaqaphi bangase bakuthele, kepha awusoze wakwazi ukufinyelela ngaphezu kwamapokhethi akho ama-jean. Ngale ndlela, ungaqhubeka ngokuzulazula uzulazule futhi uhlole izimpawu ezimangalisayo zaseYurophu.
5. Letha i-Cross-Body Bag, Hhayi Ubhaka
Lapho uzulazula emigwaqweni ebukekayo yaseYurophu, noma ume kulayini weLouvre kufanele ukhululeke. Ukugqoka izicathulo ezintofontofo kubalulekile njengokuthatha isikhwama esiphambanayo uma uhamba. Isikhwama somzimba esiphambanweni sisho ukuhamba ngaphandle kokukhathazeka, njengoba ungadingi ukulokhu ubheka ehlombe ukuze ubone ukuthi ukhona yini ozungeza phezu kwakho kolayini abaminyene.
Ngaphezu kwalokho, ungavele ubambe ibhodlela lamanzi noma isikhwama esikhwameni esinomzimba ophambanayo. Ngakho, ukuletha isikhwama somzimba esinqamulelayo kuhle ukugwema ukukha phezulu eYurophu, kanye nokubuka indawo kalula nangokunethezeka.
6. Amathiphu Wokugwema AmaPokhethi: Gqoka Futhi Ulingise Njengendawo
Enye yezinto enikeza izivakashi indawo yokuya kuma-pickpocket ochwepheshe imfashini ehlukile kakhulu yezokuvakasha: izikhwama, ukugqoka kwezemidlalo, nokwenza njengesivakashi. Ama-cathedrals, izikwele zasendulo, futhi izimpawu eziningi eYurophu zihlaba umxhwele kangangoba izivakashi zivame ukuma zigqolozele nje, noma uthathe izithombe ezingamakhulu.
Ithiphu engcono kakhulu yokugwema ukukha phezulu eYurophu ukuxubana nesixuku sendawo. Ngakho-ke, njengoba nje ubheka ngaphambi kwezindawo ezihamba phambili ongazivakashela endaweni oya kuyo, hlola izitayela namasiko endawo.
7. Amathiphu Wokugwema AmaPokhethi: Yiba Nomshwalense Wokuhamba
Ukuthola umshuwalense wokuhamba ngaphambi kohambo lubalulekile. Namuhla ungathola izimpahla zakho eziyigugu kanye nemithwalo yakho kumshuwalense futhi, uma kwenzeka ilahlekile noma kulokhu, eyebiwe. Umshuwalense wokuhamba ungasindisa impilo uma i-wallet yakho namakhadi kwebiwa, ezweni langaphandle kungekho muntu ozokusiza.
Ekuphetheni, Ukuhamba kuyindlela enhle yokuhlola amasiko, amazwe futhi uthole imibono emangalisayo. Iningi lokuhlangenwe nakho kohambo kuyamangalisa futhi akuvamile ukuthi izivakashi zihlangane nokukhahlelwa izinto eYurophu. Nokho, ngaso sonke isikhathi kungcono kakhulu ukuzilungiselela futhi uthathe izinyathelo zokuphepha, njengokulandela amathiphu ethu okuthi ungakugwema kanjani ukuqolwa e-Europe.
Lapha e Londoloza Isitimela, sizojabula ukukusiza uhlele iholidi eliphephile nelingasoze lilibaleka kunoma iyiphi indawo eYurophu ngesitimela.
Ngabe ufuna ukushumeka okuthunyelwe kwebhulogi lethu “Amathiphu Wokugwema Amaphikhethi EYurophu” kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-avoid-pickpockets-europe%2F%3Flang%3Dzu ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)